मुटु जोगाउन के गर्ने ? » Khulla Sanchar
मुटु जोगाउन के गर्ने ?
धूमपान त्याग गरेमा कुनै पनि मानिस लामो समयसम्म बाँच्न सक्छ । धूमपान गर्ने व्यक्तिमा अन्य व्यक्तिको तुलनामा दुई गुना ह्दयघात हुने सम्भावना हुन्छ । तर, यदि तपाईंमा पिउने आदत छ भने चुरोट पिउन छोडेको दिनदेखि नै हृदयघातको खतरा कम हुन्छ ।
नुन कम खानुहोस्
अत्यधिक नुनले उच्च रक्तचाप हुनुका साथै मुटुका धमनीहरु असामान्य रुपमा चल्दा मुटुको रोग बढ्ने खतरा हुन्छ । नुनिलो, आलु चिप्स, बदाम, प्याकेटमा राखिएको सुप र सस, टोम्याटो सस, फ्राई गरेको सागसब्जी, पोर्क, पिजा र तयारी मासु सकभर नखानुहोस् । ब्रेकफास्टमा प्रयोग हुने रोटीमा हेर्दा स्वस्थ देखिए पनि अत्यधिक नुन राखिएको हुनाले यसको उपभोग गर्दा विशेष ख्याल गर्नुहोस् ।
डाइटको ख्याल गर्नुहोस्
स्वस्थ डाइटले मुटुको रोग लाग्ने खतरा न्यून हुनुका साथै हृदयघात भएपछि पनि बाँच्ने सम्भावना बढी नै हुन्छ । पर्याप्त ताजा फलफूल र सागसब्जी, कार्बोहाइड्रेडयुक्त गेडागुडी, पास्तालगायत सन्तुलित भोजनको प्रयत्न गर्नुहोस् । बिस्कुट, केक र डेरीबाट उत्पादित चिल्ला र गुलियो खानेकुरा कहिल्यै नखानुहोस् ।
मदिराको मात्रा अनुगमन गर्नुहोस्
अत्यधिक रक्सीको मात्राले मुटुको मांसपेसीलाई हानि र उच्च रक्तचाप बढाउनुका साथै अस्वाभाविक रुपमा तौल बढ्न सक्छ । अत्यधिक मदिरा सेवनले हृदयघातको अत्यधिक खतरा भएकाले पिउने आदत भए पनि आजैदेखि दिनको एक वा दुई प्याकमा सीमित गर्नुहोस् ।
सदा सक्रिय रहनुहोस्
मुटु पनि एउटा मांसपेशी भएकाले यसलाई तन्द्रुस्त राख्न मुटुलाई पनि व्यायामको आवश्यकता पर्छ, ताकि हरेक मुटुको धड्कनमा यसले स्वस्थ रगत शरीरभरि फैलाउन सकोस् । दिनमा कम्तीमा ३० मिनेट औसत दरको व्यायाम गर्नहोस् । तन्दुरुस्तीले शारीरिक स्वास्थ्य मात्र होइन, यसले मानसिक स्वास्थ्य र समृद्धि बनाउँछ ।
तौल ख्याल गर्नुहोस्
बेलायतमा अत्यधिक तौल हुने मानिसको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । प्रौढमध्येको आधा जनसंख्या मोटोपनबाट पीडित छ । अत्यधिक मोटोपन भएका मानिसमा चिल्लो पदार्थ पनि अधिक हुने भएकाले उनीहरुमा औसत मानिसमा भन्दा ५ गुना बढी मुटु र चिनी रोग हुने सम्भावना हुन्छ । यदि तपाईंमा पनि मोटोपनको समस्या छ भने आजैदेखि तौल न्यून गरी मुटुरोगबाट बच्नुहोस् ।
रक्तचाप र कोलस्ट्रोलको मात्र नियमित परीक्षण गर्नुहोस
जति तपाईमा उच्च रक्तचाप छ, त्यति नै आयु घट्ने सम्भावना हुन्छ । उच्च रक्तचाप भएका मानिसहरुमा ह्दयघातको बढी खतरा हुन्छ । सन्तृप्त चिल्लोबाट कलेजोले उत्पन्न गरेको रगतमा कोलस्ट्रोलको मात्र अधिक भएमा मुटुका धमनीमा चिल्लो बढ्नुका साथै ह्दयघात लगायतका मुटु रोग लाग्न सक्छ । कोलस्ट्रोलको तह घटाउन नियमित व्यायम र भोजनमा ख्यान गर्नुपर्छ । उच्च फाईबरयुक्त खानाहरु जस्तै गहँुको ढिडो, गेडागुडी, बदाम, फलफुल र सागपातको नियमित भोजनले कोलस्ट्रोलको मात्रा घटाउछ ।
तनाबबाट मुक्त हुनुहोस
यदि माथिका उपाय अप्नाए पनि तपाईको जीवनमा तनाब छ भने कुनै न कुनै रपमा मुटुमा समस्या हुन्छ । तसर्थ, ध्यान, व्यायम गरेर तनाबरहित जीवन जीउनुहोस ।
वंशाणुगत रोगको पहिचान गर्नुहोस
कतिपय रोग वंशाणुगत हुन्छन् । आफ्नो परिबारका कोहीलाई उच्च रक्तचाप, उच्च कोलस्ट्रोल, मधुमेह र मुटुसम्बन्धी रोग लागेको छ भने तपाइलाई पनि यसको बढी खतरा हुन सक्छ ।